Ochicho nke ichoputa udiri uzo di iche na India - Magazine Magazine
Isi Akụkọ ụwa Eshia
в Eshia, News
Na-adịbeghị anya, na mmepụta nke nduku na India mụbara nke ukwuu, na-eme ka ọ bụrụ mba nke abụọ na-akọpụta nduku n'ụwa niile. Tụkwasị na nke ahụ, ọnụ ọgụgụ ndị na-arụ ọrụ nhazi na-eto eto tinyere ụdị ụfọdụ. Nke a na-akọ site na Internet Portal www.mdpi.com.
Mgbalị mmekorita nke mmekorita nke mmemme mmeghari nke nduku na Central Potato Research Institute (CPRI) emeela ka ihe ndozi 65 buru ibu, na 23 cultivars ugbu a ruru ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 95% nke ngụkọta nduku na India.
Nduku iche ke India
N'ime ụdị 65 a, 33 na-eguzogide ọgwụ dị iche iche biotic na abiotic, na ụdị 8 dị mma maka nhazi ụlọ ọrụ.
N'ezie, ndị a niile nduku iche na-ekewa atọ dị iche iche nke ripeness: mmalite, ọkara na mbubreyo.
Enwere ọchịchọ na-eto eto maka ụdị poteto ọhụrụ nwere afọ ojuju na njirimara teknụzụ, ezubere maka ịhazi n'ime ibe na fries, iji gboo mkpa ụlọ na mkpa nke ahịa mbupụ.
Na mbụ na India, a na-ejikarị poteto eme ihe maka oriri ọhụrụ, na ọtụtụ ihe ubi bụ maka oriri ụlọ, ebe mba ndị mepere emepe, iji tebụl okpokoro bụ naanị 31%, ndị ọzọ bụ friji French friji (30%), ibe ( 12%).
Nri nduku na India
Nhazi nduku amabeghị emepe ruo afọ 1990, mgbe ahụ, na mmalite nke nhazi ahaziri nke ụlọ ọrụ si mba ọzọ na ndị egwuregwu mpaghara, ụlọ ọrụ ahụ gbagoro ngwa ngwa wee gosi nnukwu mmụba na afọ 10. Ka ọ dị ugbu a, ọ fọrọ nke nta ka 7,5% nduku na-edozi.
Ka ọ dị ugbu a, ndị na-azụ ihe na-aga n'ihu ịzụlite ụdị dị iche iche dị mma maka nhazi.
Ya mere, ọ dị mkpa ịchọpụta genotypes nduku na àgwà ndị na-emeghachi omume na-agbanwe agbanwe ahịa na ọnọdụ mmepụta. Ihe kachasị mkpa bụ nhọrọ nke iche dị ka njirimara ndị a: mmegharị maka ụbọchị dị mkpirikpi, oge ntozu oke, iguzogide mbubreyo mbubreyo ye usọp usọp usọ.
Nyocha nke genotypes nduku na njirimara teknụzụ ka mma na ime mgbanwe dị iche iche dị mkpa maka ngalaba niile nke nduku. Ka ọ dị ugbu a, ndị ọkà mmụta sayensị India enyochala usoro ịmị mkpụrụ iri iri abụọ na otu iji nweta azụmaahịa dị elu karịa na njirimara njirimara.
isi: Informatiili APK
Tags: nduku na-etoIndianduku